သင်လေ ချာလေ သင်္ချာမဖြစ်ရအောင်
8 May 2017 . 6:27 PM
သင်္ချာဆိုတာ လူတော်တော်များများအတွက်တော့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော်ဆို သင်္ချာမပါတဲ့ ဘာသာတွဲရှိရင် ယူမယ်ဆိုတဲ့ အထိ ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ 😀 ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သချာင်္ကို စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကြောက်စရာမကောင်းတော့တဲ့ အပြင် သချာင်္တော်ပြီး ပျော်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။ အနာသိရင် ဆေးရှိတယ်ဆိုသလိုမျိုးပေါ့ဗျာ။
သချာင်္တွက်ရတော့မယ့်တာနဲ့ ခေါင်းတွေ မူးချင်လာတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သင်္ချာ skill ကို တိုးတက်စေနိုင်မလဲ လက်တို့ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။
1. ခင်ဗျားရဲ့ သင်္ချာဥာဏ်ကို ထက်နေအောင် သွေးပါ။
၁။ သင်္ချာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ game တွေကို ကစားပါ။
သင်္ချာဂိမ်းတွေ၊ ဥာဏ်စမ်းဂိမ်းတွေဟာ ခင်ဗျားရဲ့ သင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုကို နှိုးဆွပေးနိုင်သလို ကစားနေတဲ့အခါမှာလည်း သင်္ချာတွက်ရသလို ပျင်းစရာ၊ ကြောက်စရာမကောင်းဘဲ ပျော်ပျော်ကြီးဆော့ရမှာမို့လိုပါပဲ။ ကစားလို့ ကောင်းတဲ့ သချာင်္ဂိမ်းတချို့ကို ညွှန်းရရင်တော့
DragonBox5+ – ဒါကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ အက္ခရာသင်္ချာစွမ်းရည်ကို ပိုကောင်းအောင် တည်ဆောက်ပေးတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပါ၊ ခင်ဗျား မကျွမ်းကျင်မချင်း ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
Prodigy – ဒီဂိမ်းကတော့ Elementary-school အရွယ်ကျောင်းသားတွေအတွက် ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ ဒီ Role-playing ဂိမ်းမှာ ကစားသမားတွေကို သင်္ချာကို အသုံးပြုစေပြီး နှစ်သက်ဖွယ်ဆန်းကြယ်ကမ္ဘာမှာ ပါဝင်ဆော့ကစားစေတာပါ။
ဒီလိုမျိုး တခြားဂိမ်းတွေလည်း Online မှာ ရနိုင်သေးသလို apps တွေလည်း အများကြီးရှိသေးတဲ့ အတွက် နည်းနည်းပိုရှာဖွေလိုက်ရင် ခင်ဗျားနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ထပ်တွေ့လာမှာပါ။
၂။ သင်္ချာကို ခင်ဗျားဘဝအစိတ်အပိုင်းထဲမှာပါ ပါဝင်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ခင်ဗျားရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲက ရောနှောပေါင်းစပ်ထားတဲ့ သင်္ချာနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ ခင်ဗျားရဲ့ သင်္ချာဥာဏ်ရည်ကို ထက်မြက်စေသလို ခင်ဗျားရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သင်္ချာနဲ့ မကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာလည်း သတိရစေပါတယ်။
အများအားဖြင့်တော့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ သုံးရတာ အသုံးချသင်္ချာပါ။ ဥပမာဗျာ ခင်ဗျားက sweater တစ်ထည်ကို ၃၈၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်မယ်ဆိုပါတော့၊ ဆိုင်က ဈေးနှုန်းကပ်ပြားပေါ်မှာ ၃၀ ရာနှုန်းလျှော့ပေးထားတယ်ဆိုရင် မူရင်းဈေးနှုန်းက ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ စဉ်းစားကြည့်တာမျိုးပေ့ါ။
ဒါမှ မဟုတ်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အခြေအနေသစ်တစ်ခုဖန်တီးပြီး သင်္ချာစွမ်းရည်ထုတ်သုံးလို့ရအောင် လုပ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာက ခင်ဗျားက လမ်းလျှောက်တာ ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် ၇မိုင်စာလောက် လျှောက်မယ် စိတ်ကူးထားကြည့်လိုက်ဗျာ။ ခင်ဗျားက မိနစ်၂၀ကို တစ်မိုင်စာ လျှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီခရီးကို ရောက်ဖို့ ဘယ်လောက်အချိန်ဖြုန်းမလဲ၊ မြန်မြန်စံချိန်သစ်တင်ချင်ရင် ဘယ်နှစ်မိနစ်နဲ့ တစ်မိုင်ကို အပြီးလျှောက်ရမလဲ။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း ခင်ဗျားရဲ့ သူငယ်ချင်းကို သွားကြိုဖို့ ၁၃ မိုင်စာ ကားမောင်းရမယ်၊ ကြိုရမယ့် အချိန်က နေ့လည် ၁း၃၀ အရောက်ဆိုပါစို့။ အမြန်နှုန်းကန့်သက်ချက်ကလည်း 45 mph ( 72 km/h) ပဲ မောင်းလို့ ရတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားသူ့ဆီရောက်ဖို့ ဘယ်ချိန်အိမ်က ထွက်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတာမျိုးပေါ့။
၃။ ခြုံငုံပြီး စဉ်းစားပါ။
သင်္ချာကို တကုပ်ကုပ်တွက်၊ Formula တွေ တတွတ်တွတ်ကျက်ရတာ တစ်ခါတလေတော့ စိတ်ပျက်စရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ ဒါဟာလည်း သင်္ချာကို ကြောက်ရတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီ Formula တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေ၊ ဘာကြောင့် ဒီလို Formula ဖြစ်လာရသလဲလို့ စဉ်းစားရင် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသနပြုတာလေးနဲ့ စပါ။ Pythagorean Theorem ကို ခင်ဗျား သင်ကြားနေတယ်ဆိုပါစို့။ Pythagoras ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ၊ သူက ဒီတြိဂံတွေနဲ့ ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲ၊ ဒီ Theorem ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ဘယ်သူတွေကရော ဆက်လက်လေ့လာအသုံးပြုကြသေးလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ Math Concept တစ်ခု၊ Formula တစ်ခုကို ဒီအတိုင်းမှတ်နေမယ့်အစား ဒီလိုမျိုးမှတ်တာက ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ပိုနားလည်လွယ်စေမှာပါ။
ဥပဒေသ အသစ်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ဒီ Pythagorean Theorem ကိုပဲ တြိဂံမဟုတ်ဘဲ တခြား Shapes တွေမှာရော အသုံးချလို့ ရမလား၊ ဥပမာ ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ စတုရန်းတွေနဲ့ ဆဋဂံတွေမှာရော အသုံးချလို့ ရလား၊ ရတယ်ဆို ဘာလို့လဲ၊ မရဘူးဆိုရင်ရော ဘာလို့ မရတာလဲပေါ့။ ဒီလိုပေါင်းစပ်တွေးကြည့်တာဟာ သင်္ချာကို ရိုးရိုးလေ့လာတာထက် ပိုတာသွားစေပါတယ်။
2. သင်္ချာအတန်းတွေ သွားတက်တော့မယ်ဆိုရင်
၁။ စာလေ့လာချိန်ကို သေချာဆွဲပါ။
သင်္ချာကြောက်တယ်ဆိုရင် သင်္ချာအတွက် အချိန်သက်သက်ပေးပါ။ သင်္ချာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အိမ်စာတွေ၊ Assignment တွေ မရှိဘူးဆိုရင်တောင် တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက် ပုံစံတူ ပုစ္ဆာတွေ တွက်တာမျိုး၊ မှတ်စုတွေ ပြန်ကြည့်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ နေ့စဉ်လေ့လာပေးခြင်းဟာ သင်္ချာစွမ်းရည်ကို ပိုမိုမြင့်တက်စေပါတယ်။
သတိပြုရမှာက သင်္ချာလေ့လာခြင်းဟာ အခြားဘာသာရပ်လေ့လာခြင်းနဲ့ မတူတာက များများလေ့ကျင့်တွက်ချက်နေဖို့ လိုတာပါပဲ။ များများလေ့ကျင့်လေ၊ ပိုပိုတော်လာလေပေါ့။
နောက်လာမယ့် အတန်းမှာ သင်မယ့် Chapter ကို ကြိုဖတ်ထားပါ။ ဒီလိုကြိုဖတ်ထားခြင်းဟာ သင်္ချာမှ မဟုတ်၊ ဘယ်ဘာသာရပ်မဆို ဒီအလေ့အကျင့်ဟာ အတော်ကောင်းပါတယ်။ အတန်းကို မရောက်ခင်မှာ သင်မယ့် Chapter ရဲ့ အဓိက Idea ကို တီးမိခေါက်မိရှိရင် ရပါပြီ။
မေးခွန်းမေးစရာရှိရင်၊ မရှင်းတာရှိရင် မေးဖို့ ကြောက်မနေပါနဲ့။ ချက်ချင်းမေးဖို့ အဆင်မပြေရင်တောင် ကိုယ့်မေးခွန်းတွေကို ချရေးထားပြီး အတန်းအပြီးမှာ မေးလို့ရပါတယ်။
၁။ သင်္ချာကြောက်တယ်ဆိုရင် သင်္ချာကို ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ လေ့လာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပုံမှန်လေ့လာနည်းကို သုံးပါ။ နေ့စဉ်ဒီအချိန်ဆိုရင် ဒီအချိန်ပဲ လေ့လာတာမျိုးပေါ့။
Study Time ပြီးတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး ဆုချီးမြှင့်ပါ။ ဥပမာ -မုန့်ထွက်စားလိုက်တာမျိုး၊ ဂိမ်းတစ်ပွဲဆော့လိုက်တာမျိုးပေါ့။ ဒါမှသာ လေ့ကျင့်ရတာ ပျော်လာပြီး သင်္ချာတော်လာမှာပေ့ါဗျာ။
တစ်နာရီပြီးတိုင်း ခဏအနားယူပါ။ သင်္ချာဆိုတာ ဆက်တိုက်တွက်ချက်နေရင် အာရုံစိုက်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မြန်ပင်ပန်းလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို ဖင်ပူအောင် ထိုင်နေမယ့် အစား မတ်တပ်ထရပ်၊ အပျင်းဆန့်တန်သည် ဆန့်၊ တစ်ခုခုသောက်တာမျိုး ဒါမှ မဟုတ် ရေအိမ်သွားတာမျိုး လုပ်ပြီးမှ ပြန်ထိုင်ပါ။
၂။ စာလုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းကို ပျိုးထောင်ပါ။
တတ်နိုင်သမျှ Guide နဲ့ ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် စာလုပ်ဖော်တစ်ယောက်ထားပြီး လေ့လာပါ။ ဘေးနားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရှိနေတာဟာ တစ်ယောက်အမှား တစ်ယောက်ထောက်ပြနိုင်ပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လည်း ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်နိုင်လို့ပါပဲ။
တကယ်လို့ ခင်ဗျားရော၊ ခင်ဗျားသူငယ်ချင်းရော မဖြေနိုင်တဲ့ ဟာမျိုး ရှိရင် ချရေးထားပြီး သင်ပေးတဲ့ သူကို ပြန်မေးပါ။
၃။ နောက်တစ်ခန်းကို မသွားခင် လက်ရှိလေ့လာနေတဲ့ အခန်းကို ကျေညက်ပါစေ။
သင်္ချာရဲ့ သဘောကတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာ ရှိပြီးသား အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ် မှီပြီး တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ပထမတစ်ခုကို ကျေကျေညက်ညက်မပိုင်နိုင်ရင် နောက်တစ်ခု တက်ဖို့ ခက်သွားပါပြီ။
Formula တစ်ခု၊ Concept တစ်ခုကို မရသေးဘူး၊ ခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင် ကျော်ချလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ အဲဒီအစား ဆရာတွေဆီက အကူအညီယူပြီး ရှင်းလင်းတဲ့ထိ မေးပါ၊ နားလည်တဲ့ထိ တွက်ပါ။
၄။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဆင့်တွေကို ချရေးထားတာမျိုးလုပ်ပါ။
သင်္ချာပုစ္ဆာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ အခါမှာ ဦးနှောက်ထဲမှာပဲ တွက်ချက်ဖြေရှင်းလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဆင့်တိုင်းကို ချရေးထားပါ။
ချမရေးထားဘူးဆိုရင် မှားလို့ တစ်ခုခုပြန်ပြင်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်အဆင့်မှာ မှားလဲဆိုတာကို ရှာရတာ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ မှတ်မိရုံတင်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ပဲ သင်္ချာဘာသာရပ်အမှတ်ပေးတဲ့ သူတွေကလည်း နောက်ဆုံးအဖြေထွက်ချက်ကိုတင် မဟုတ်ဘဲ တွက်ပုံတွက်နည်း ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုကိုလည်း အမှတ်ပေးတတ်ကြလို့ပါပဲ။
ဒီလောက်ဆို သင်္ချာကို စနစ်တကျလေ့လာနည်းတွေ၊ ဘယ်လို တိုးတက်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေ သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ သင်လေ ချာလေ သင်္ချာမဖြစ်စေဘဲ သင်္ချာအရာမှာ ပျော်တိုင်း တွက်၊ တော်တိုင်း ထက်ပါစေ။
သငျလေ ခြာလေ သင်ျခြာမဖွဈရအောငျ
သင်ျခြာဆိုတာ လူတျောတျောမြားမြားအတှကျတော့ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ဘာသာရပျဖွဈနဆေဲပါပဲ။ ကြှနျတျောဆို သင်ျခြာမပါတဲ့ ဘာသာတှဲရှိရငျ ယူမယျဆိုတဲ့ အထိ ကွောကျခဲ့ပါတယျ။ 😀 ဒါပမေယျ့ အဲဒီ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ သခြာင်္ကို စနဈတကြ ခဉျြးကပျနိုငျမယျဆိုရငျ ကွောကျစရာမကောငျးတော့တဲ့ အပွငျ သခြာင်္တျောပွီး ပြျောလာမှာ အမှနျပါပဲ။ အနာသိရငျ ဆေးရှိတယျဆိုသလိုမြိုးပေါ့ဗြာ။
သခြာင်္တှကျရတော့မယျ့တာနဲ့ ခေါငျးတှေ မူးခငျြလာတာမြိုး မဖွဈရလအေောငျ ဘယျလိုနညျးလမျးတှကေ ခငျဗြားတို့ရဲ့ သင်ျခြာ skill ကို တိုးတကျစနေိုငျမလဲ လကျတို့ပွီး ပွောပွခငျြပါတယျ။
1. ခငျဗြားရဲ့ သင်ျခြာဉာဏျကို ထကျနအေောငျ သှေးပါ။
၁။ သင်ျခြာနဲ့ ပကျသကျတဲ့ game တှကေို ကစားပါ။
သင်ျခြာဂိမျးတှေ၊ ဉာဏျစမျးဂိမျးတှဟော ခငျဗြားရဲ့ သင်ျခြာကြှမျးကငျြမှုကို နှိုးဆှပေးနိုငျသလို ကစားနတေဲ့အခါမှာလညျး သင်ျခြာတှကျရသလို ပငျြးစရာ၊ ကွောကျစရာမကောငျးဘဲ ပြျောပြျောကွီးဆော့ရမှာမို့လိုပါပဲ။ ကစားလို့ ကောငျးတဲ့ သခြာင်္ဂိမျးတခြို့ကို ညှနျးရရငျတော့
DragonBox5+ – ဒါကတော့ ခငျဗြားရဲ့ အက်ခရာသင်ျခြာစှမျးရညျကို ပိုကောငျးအောငျ တညျဆောကျပေးတဲ့ ဂိမျးတဈခုပါ၊ ခငျဗြား မကြှမျးကငျြမခငျြး ဆော့ကစားနိုငျပါတယျ။
Prodigy – ဒီဂိမျးကတော့ Elementary-school အရှယျကြောငျးသားတှအေတှကျ ပဈမှတျထားပွီးတော့ ဒီ Role-playing ဂိမျးမှာ ကစားသမားတှကေို သင်ျခြာကို အသုံးပွုစပွေီး နှဈသကျဖှယျဆနျးကွယျကမ်ဘာမှာ ပါဝငျဆော့ကစားစတောပါ။
ဒီလိုမြိုး တခွားဂိမျးတှလေညျး Online မှာ ရနိုငျသေးသလို apps တှလေညျး အမြားကွီးရှိသေးတဲ့ အတှကျ နညျးနညျးပိုရှာဖှလေိုကျရငျ ခငျဗြားနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ဂိမျးတှကေို ထပျတှလေ့ာမှာပါ။
၂။ သင်ျခြာကို ခငျဗြားဘဝအစိတျအပိုငျးထဲမှာပါ ပါဝငျအောငျပွုလုပျပါ။
ခငျဗြားရဲ့ နစေ့ဉျဘဝထဲက ရောနှောပေါငျးစပျထားတဲ့ သင်ျခြာနဲ့ဆိုငျတဲ့ မေးခှနျးတှဟော ခငျဗြားရဲ့ သင်ျခြာဉာဏျရညျကို ထကျမွကျစသေလို ခငျဗြားရဲ့ ပတျဝနျးကငျြဟာ သင်ျခြာနဲ့ မကငျးနိုငျဘူးဆိုတာလညျး သတိရစပေါတယျ။
အမြားအားဖွငျ့တော့ နစေ့ဉျဘဝမှာ သုံးရတာ အသုံးခသြင်ျခြာပါ။ ဥပမာဗြာ ခငျဗြားက sweater တဈထညျကို ၃၈၀၀၀ ကပျြနဲ့ ဝယျမယျဆိုပါတော့၊ ဆိုငျက ဈေးနှုနျးကပျပွားပျေါမှာ ၃၀ ရာနှုနျးလြှော့ပေးထားတယျဆိုရငျ မူရငျးဈေးနှုနျးက ဘယျလောကျဖွဈမလဲ စဉျးစားကွညျ့တာမြိုးပေ့ါ။
ဒါမှ မဟုတျလညျး ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ အခွအေနသေဈတဈခုဖနျတီးပွီး သင်ျခြာစှမျးရညျထုတျသုံးလို့ရအောငျ လုပျကွညျ့ပါ။ ဥပမာက ခငျဗြားက လမျးလြှောကျတာ ဝါသနာပါတယျဆိုရငျ ၇မိုငျစာလောကျ လြှောကျမယျ စိတျကူးထားကွညျ့လိုကျဗြာ။ ခငျဗြားက မိနဈ၂၀ကို တဈမိုငျစာ လြှောကျနိုငျတယျဆိုရငျ ဒီခရီးကို ရောကျဖို့ ဘယျလောကျအခြိနျဖွုနျးမလဲ၊ မွနျမွနျစံခြိနျသဈတငျခငျြရငျ ဘယျနှဈမိနဈနဲ့ တဈမိုငျကို အပွီးလြှောကျရမလဲ။ ဒါမှ မဟုတျလညျး ခငျဗြားရဲ့ သူငယျခငျြးကို သှားကွိုဖို့ ၁၃ မိုငျစာ ကားမောငျးရမယျ၊ ကွိုရမယျ့ အခြိနျက နလေ့ညျ ၁း၃၀ အရောကျဆိုပါစို့။ အမွနျနှုနျးကနျ့သကျခကျြကလညျး 45 mph ( 72 km/h) ပဲ မောငျးလို့ ရတယျဆိုရငျ ခငျဗြားသူ့ဆီရောကျဖို့ ဘယျခြိနျအိမျက ထှကျရငျ ကောငျးမလဲ စဉျးစားတာမြိုးပေါ့။
၃။ ခွုံငုံပွီး စဉျးစားပါ။
သင်ျခြာကို တကုပျကုပျတှကျ၊ Formula တှေ တတှတျတှတျကကျြရတာ တဈခါတလတေော့ စိတျပကျြစရာ အရမျးကောငျးပါတယျ၊ ဒါဟာလညျး သင်ျခြာကို ကွောကျရတဲ့ အခကျြတှထေဲက တဈခုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ Formula တှရေဲ့ နောကျကှယျက အကွောငျးအရာတှေ၊ ဘာကွောငျ့ ဒီလို Formula ဖွဈလာရသလဲလို့ စဉျးစားရငျ ပိုပွီး စိတျဝငျစားစရာကောငျးပွီး အလုပျဖွဈပါတယျ။
သုတသေနပွုတာလေးနဲ့ စပါ။ Pythagorean Theorem ကို ခငျဗြား သငျကွားနတေယျဆိုပါစို့။ Pythagoras ဆိုတာ ဘယျသူလဲ၊ သူက ဒီတွိဂံတှနေဲ့ ဘာလုပျခဲ့တာလဲ၊ ဒီ Theorem ဘယျလိုဖျောထုတျခဲ့ပွီး ဘယျသူတှကေရော ဆကျလကျလလေ့ာအသုံးပွုကွသေးလဲဆိုတာမြိုးပေါ့။ Math Concept တဈခု၊ Formula တဈခုကို ဒီအတိုငျးမှတျနမေယျ့အစား ဒီလိုမြိုးမှတျတာက ပိုစိတျဝငျစားစရာကောငျးပွီး ပိုနားလညျလှယျစမှောပါ။
ဥပဒသေ အသဈစဉျးစားကွညျ့ပါ၊ ဒီ Pythagorean Theorem ကိုပဲ တွိဂံမဟုတျဘဲ တခွား Shapes တှမှောရော အသုံးခလြို့ ရမလား၊ ဥပမာ ထောငျ့မှနျစတုဂံ၊ စတုရနျးတှနေဲ့ ဆဋဂံတှမှောရော အသုံးခလြို့ ရလား၊ ရတယျဆို ဘာလို့လဲ၊ မရဘူးဆိုရငျရော ဘာလို့ မရတာလဲပေါ့။ ဒီလိုပေါငျးစပျတှေးကွညျ့တာဟာ သင်ျခြာကို ရိုးရိုးလလေ့ာတာထကျ ပိုတာသှားစပေါတယျ။
2. သင်ျခြာအတနျးတှေ သှားတကျတော့မယျဆိုရငျ
၁။ စာလလေ့ာခြိနျကို သခြောဆှဲပါ။
သင်ျခြာကွောကျတယျဆိုရငျ သင်ျခြာအတှကျ အခြိနျသကျသကျပေးပါ။ သင်ျခြာနဲ့ ပကျသကျပွီး အိမျစာတှေ၊ Assignment တှေ မရှိဘူးဆိုရငျတောငျ တဈနကေို့ အနညျးဆုံး ၁၅ မိနဈလောကျ ပုံစံတူ ပုစ်ဆာတှေ တှကျတာမြိုး၊ မှတျစုတှေ ပွနျကွညျ့တာမြိုး လုပျပေးပါ။ နစေ့ဉျလလေ့ာပေးခွငျးဟာ သင်ျခြာစှမျးရညျကို ပိုမိုမွငျ့တကျစပေါတယျ။
သတိပွုရမှာက သင်ျခြာလလေ့ာခွငျးဟာ အခွားဘာသာရပျလလေ့ာခွငျးနဲ့ မတူတာက မြားမြားလကေ့ငျြ့တှကျခကျြနဖေို့ လိုတာပါပဲ။ မြားမြားလကေ့ငျြ့လေ၊ ပိုပိုတျောလာလပေေါ့။
နောကျလာမယျ့ အတနျးမှာ သငျမယျ့ Chapter ကို ကွိုဖတျထားပါ။ ဒီလိုကွိုဖတျထားခွငျးဟာ သင်ျခြာမှ မဟုတျ၊ ဘယျဘာသာရပျမဆို ဒီအလအေ့ကငျြ့ဟာ အတျောကောငျးပါတယျ။ အတနျးကို မရောကျခငျမှာ သငျမယျ့ Chapter ရဲ့ အဓိက Idea ကို တီးမိခေါကျမိရှိရငျ ရပါပွီ။
မေးခှနျးမေးစရာရှိရငျ၊ မရှငျးတာရှိရငျ မေးဖို့ ကွောကျမနပေါနဲ့။ ခကျြခငျြးမေးဖို့ အဆငျမပွရေငျတောငျ ကိုယျ့မေးခှနျးတှကေို ခရြေးထားပွီး အတနျးအပွီးမှာ မေးလို့ရပါတယျ။
၁။ သင်ျခြာကွောကျတယျဆိုရငျ သင်ျခြာကို ပထမဦးစားပေးအနနေဲ့ လလေ့ာပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ ပုံမှနျလလေ့ာနညျးကို သုံးပါ။ နစေ့ဉျဒီအခြိနျဆိုရငျ ဒီအခြိနျပဲ လလေ့ာတာမြိုးပေါ့။
Study Time ပွီးတိုငျး ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျပွီး ဆုခြီးမွှငျ့ပါ။ ဥပမာ -မုနျ့ထှကျစားလိုကျတာမြိုး၊ ဂိမျးတဈပှဲဆော့လိုကျတာမြိုးပေါ့။ ဒါမှသာ လကေ့ငျြ့ရတာ ပြျောလာပွီး သင်ျခြာတျောလာမှာပေ့ါဗြာ။
တဈနာရီပွီးတိုငျး ခဏအနားယူပါ။ သင်ျခြာဆိုတာ ဆကျတိုကျတှကျခကျြနရေငျ အာရုံစိုကျနိုငျတော့မှာ မဟုတျဘဲ မွနျမွနျပငျပနျးလာပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီလို ဖငျပူအောငျ ထိုငျနမေယျ့ အစား မတျတပျထရပျ၊ အပငျြးဆနျ့တနျသညျ ဆနျ့၊ တဈခုခုသောကျတာမြိုး ဒါမှ မဟုတျ ရအေိမျသှားတာမြိုး လုပျပွီးမှ ပွနျထိုငျပါ။
၂။ စာလုပျတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးကို ပြိုးထောငျပါ။
တတျနိုငျသမြှ Guide နဲ့ ဖွဈစေ ဒါမှမဟုတျ စာလုပျဖျောတဈယောကျထားပွီး လလေ့ာပါ။ ဘေးနားမှာ တဈယောကျယောကျရှိနတောဟာ တဈယောကျအမှား တဈယောကျထောကျပွနိုငျပွီး တဈယောကျကို တဈယောကျလညျး ပွနျလှနျမေးခှနျးထုတျနိုငျလို့ပါပဲ။
တကယျလို့ ခငျဗြားရော၊ ခငျဗြားသူငယျခငျြးရော မဖွနေိုငျတဲ့ ဟာမြိုး ရှိရငျ ခရြေးထားပွီး သငျပေးတဲ့ သူကို ပွနျမေးပါ။
၃။ နောကျတဈခနျးကို မသှားခငျ လကျရှိလလေ့ာနတေဲ့ အခနျးကို ကညြေကျပါစေ။
သင်ျခြာရဲ့ သဘောကတော့ အကွောငျးအရာတဈခုဟာ ရှိပွီးသား အကွောငျးအရာတဈခုပျေါ မှီပွီး တညျဆောကျထားတာပါ။ ပထမတဈခုကို ကကြေညြေကျညကျမပိုငျနိုငျရငျ နောကျတဈခု တကျဖို့ ခကျသှားပါပွီ။
Formula တဈခု၊ Concept တဈခုကို မရသေးဘူး၊ ခကျခဲနမေယျဆိုရငျ ကြျောခလြိုကျတာမြိုးမလုပျပါနဲ့။ အဲဒီအစား ဆရာတှဆေီက အကူအညီယူပွီး ရှငျးလငျးတဲ့ထိ မေးပါ၊ နားလညျတဲ့ထိ တှကျပါ။
၄။ ဖွဈနိုငျရငျ အဆငျ့တှကေို ခရြေးထားတာမြိုးလုပျပါ။
သင်ျခြာပုစ်ဆာတှကေို ဖွရှေငျးတဲ့ အခါမှာ ဦးနှောကျထဲမှာပဲ တှကျခကျြဖွရှေငျးလိုကျတာမြိုးမလုပျပါနဲ့။ ဖွဈနိုငျရငျ အဆငျ့တိုငျးကို ခရြေးထားပါ။
ခမြရေးထားဘူးဆိုရငျ မှားလို့ တဈခုခုပွနျပွငျတော့မယျဆိုရငျ ဘယျအဆငျ့မှာ မှားလဲဆိုတာကို ရှာရတာ ခကျပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုလုပျခွငျးဟာ မှတျမိရုံတငျဖွဈစတောမဟုတျပဲ သင်ျခြာဘာသာရပျအမှတျပေးတဲ့ သူတှကေလညျး နောကျဆုံးအဖွထှေကျခကျြကိုတငျ မဟုတျဘဲ တှကျပုံတှကျနညျး ပွညျ့စုံမှနျကနျမှုကိုလညျး အမှတျပေးတတျကွလို့ပါပဲ။
ဒီလောကျဆို သင်ျခြာကို စနဈတကလြလေ့ာနညျးတှေ၊ ဘယျလို တိုးတကျအောငျ လုပျရမလဲဆိုတာတှေ သိလောကျပွီ ထငျပါတယျ။ သငျလေ ခြာလေ သင်ျခြာမဖွဈစဘေဲ သင်ျခြာအရာမှာ ပြျောတိုငျး တှကျ၊ တျောတိုငျး ထကျပါစေ။